रहिनन माइली आमा अर्थात् माओवादीहरुकी आमा « Sansar News
उदयराज गौतम, पर्वत, हाल-डेनमार्क
नौ वर्षको बाल्यकालमा उहाँको बिवाह धर्मागत तिवारीसंग भयो । बि.स.१९८२ को साउने झरीमा जन्मेकी सावित्रा तिवारी अर्थात् सबैकी माइली आमाले आज २०७८ साल माघ महिनाको ५ गते राती ९ बजे सरौंखोला मात्र छाडिनन यो धर्तिनै छाडिन ९८ बर्षको उमेरमा ।
झन्डै २ दर्जनको संख्यामा नाती नातिना र छोराछोरी हुर्काए बढाए पनि माइली आमा आंफुले भने कुनै पनि सन्तानलाई जन्म दिने खटन जुरेन । आखिर आंफुले नजन्माएर केभो र ? सन्तानलाई गर्ने लालनपालन मायाममताको अभाव उनलाई कहिल्यै भएन । नत घर परिवार छोराछोरीले गर्ने माया,कर्तब्य ,स्याहार सम्भारबाट माइली आमा कहिल्यै बन्चित हुनु पर्यो ।
‘माओवादीहरु सबै मेरा सन्तान हुन्’ भन्ने माइली आमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सल्लाहकार जयनारायण तिवारी,बुद्धिजीवी नेता निलकन्ठ तिवारी, त्रिवि कर्मचारी नेता दीपक तिवारी र जनप्रगतिशील मंच युरोपका नेता कृष्ण तिवारीकी सहोदर माइली आमा हुन् ।
’एकैदिनमा कति जना सम्मलाई भात पकाएर खुवाउनु भयो ?’ भन्ने मेरो ३ बर्ष पहिलाको जिज्ञाशा भुँइमा खस्न नपाउंदै जवाफ दिनु भयो–‘खै मैले त गनिन ठुलो बाउले एकसय पचास छन् भन्थ्यो । एकपटक मात्र कहाँ हो र ५० देखि ७०–८० जनाले माइली आमाले पकाएको भात नखाने दिन जनयुद्धकालमा बिरलै हुन्थ्यो । दश पन्ध्र जनालाई उहाँले आज त मान्छे नै छैनन् भन्नु हुन्थ्यो रे ! एकजना पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरले आफ्नो अनुभव सुनाउंदै भन्नु भएको थियो ।
गौतमसँग कुरा गर्दै आमा सावित्रा तिवारी
२०७५ साल साउन ४ गते दिउँसो एकबजे उहाँको घर पुग्दा पिंढीमा सुतिरहेको देखें,अनि बोलाएँ । पुर्लुक्क हेर्नु भयो, कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन । माइली आमा मलाई चिन्नु भयो ?’ दोस्रो पटक बोलाएँ,मुश्किलले उठ्नु भयो । एकोहोरो मेरो अनुहारमा हेर्नु भयो । केहि बोल्नु भएन तर आँखाबाट बरर आँशुका ढिका झार्नु भयो । मैले पुछी दिएँ । तिम्लाई देख्दा कृष्णको झल्को लायो । फुसफुसाउँदै भन्नु भयो । मन्द मन्द धेरैबेर कुरा भयो ।
सरौंखोलाको स्कुलमा पढाउँदा जबर्जस्ती मलाइ समाई समाई भात खुवाउने माइली आमाले जनयुद्धका जनमुक्ति सेनादेखि देशका बर्तमान राजनीतिको केन्द्रमा समेत भएका दर्जनौं नेताहरुलाई भोक लागेको बेलामा धेरैपटक रुखो सुखो खुवाउनु भयो । ती मध्ये यान प्रसाद गौतम,देव गुरुङ, लिलामणि पोख्रेल मैले सम्झेका केहि नाम हुन् । त्यतिबेला देशभरीका अरु बाक्लै माइली आमाहरुले कति भात पकाए त्यसको लेखाजोखा गर्नु अहिले निम्छरो काम हो ।
धेरैबर्षदेखि माइली आमा विरामी हुनुुहुन्थ्यो । जहा जाँदा पनि माइली आमाको स्याहार सम्भारको निम्ति मध्यरातमै भए पनि टुप्लुक्क आईपुग्ने जय दाईको अजम्बरी ज्यानलाई सगरमाथा भन्दा अग्लो सलाम छ । अनि मुलुकको काँचुली फेर्न हिंडेका राता मान्छेहरुलाई माइली आमाले गरेको माया र सद्भाव आकाशमा सुर्य चन्द्र छन्जेल अविस्मरणीय रहोस् ।
माइली आमा प्रति शब्द श्रद्धान्जली ब्यक्त गर्दछु साथै जय दाइ, भाइहरु निलम, कृष्ण, दीपक, बहिनी गोपा, लगायत समस्त परिवारमा यो शोकको घडीमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस भन्दै हार्दिक समबेदना ब्यक्त गर्दछु ।